Okwu kwa nkeji
Gbalịa adịghị anya na keyboard. Ọ ga-abụ ihe siri ike na mbụ, ma ka ị na-enwe ọganihu site na omume, ị ga-ahụ ọ na-aghọ mfe na mkpịsị aka gị ga-amalite ime na-enweghị i consciously ekpebi nke mkpịsị aka jikọtara nke isi.
Dị ka ị na-amụta pịnye, lee n'elu keyboard ịhụ nke mkpịsị aka iji. Atụla egwu na-eme ka a ndudue - ma ọ bụrụ na ị na-eme, ihe omume ga-egosi gị ziri ezi isi na-eji. Ọ bụrụ na ndị isi bụ nri, ọ na-egosi green, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọjọọ - mgbe acha uhie uhie.
Na-agbalị ozugbo ewebata nwetara ọhụrụ na ihe ọmụma dị ka akụkụ nke gị kwa ụbọchị na-eme na kọmputa, e nweghị ụzọ ka mma otú ịmụta dee.
Melite a oge. Ọ bụrụ na ị ga-a usoro mmụta, ọ dị nnọọ mfe ịchọta ihe ngọpụ maka na ọ na-eme.
Nọgidenụ na-anya na ọnụ ọgụgụ nke emehie ị na-eme ma lekwasị anya na mbenata gị emehie na-eme n'ọdịnihu ule kama ịba ụba gị dee ọsọ. Ọgwụgwụ N'ihi ga-amụba arụpụtaghị ihe.
Ị pụrụ ịhụ ya na-enye aka na-eji nwayọọ na-ekwu na aha ndị isi dị ka ị-egbu ya. Ekwela ka i mejọrọ ka ị hapụ obi; aka dee bụ nkà nwere ike mụtara site omume.
Nwee ndidi. Ozugbo ziri ezi mkpịsị aka-keystroke ihe nakawa etu esi na-mụtara, ọsọ na ziri ezi ime ndammana.
Bugharịa naanị mkpịsị aka mkpa tie a isi. Ekwela ka ndị ọzọ na mkpịsị aka kpafuo n'ebe e kenyere ha n'ụlọ n'usoro igodo.
Mkpịsị aka unu kwesịrị na ebe obibi na n'usoro igodo na aka gị kwesịrị slant n'otu n'akuku dị ka keyboard. Ekwela ka gị wrists na-ume-ngwu na ike megide oche ma ọ bụ keyboard.
Mee ọ bụla mmega ọtụtụ ugboro ruo mgbe ị nwere afọ ojuju na gị dee nkà.
Unu Bang na igodo. Gbalịa iji dị ka obere ike dị ka o kwere mee. Izu Ike n'etiti okwu site na-ezu ike iri mkpịsị aka n'elu nke igodo.
Iji ike a aka na-enweghị ka ọrụọ ọrụ igodo, idebe ihe nile ise mkpịsị aka n'out oge n'ebe ọ bụla n'elu keyboard elu.
Kpatụ ọ bụla isi si na akara ejighị ya kpọrọ ma crisply na otu aka na a oge, na-elekọta ghara mmadụ na mberede enweta na-atụghị igodo.
Iji rụọ ọrụ akpaaka-imekwa, metụ ma jide otu mkpịsị aka na chọrọ isi. Welite mkpịsị aka ịkwụsị akpaaka-imekwa.
Dee egwuregwu a fun ụzọ mma gị dee ọsọ na ziri ezi. Nwere fun mgbe ị na-amụta!
The mkpịsị aka nchikota omume na nchegbu na mbenata omume ga-enyere ibelata obi erughị ala na ha na-etinye ọnụ ọchị gị ihu. A obi ụtọ ọchịchọ na a obi ụtọ na gburugburu ebe obibi pụrụ ime ka mmụta fun.
Gbaa mbọ hụ na ị na-ekwe dịkarịa ala minit 30 ka onye ọ bụla ihe.
Gbaa mbọ hụ na ị na-mkpịsị aka gị dị ka nso n'ụlọ ọkwá ya dị ka o kwere omume na ibelata aka gị mmegharị mgbe ị na-amụta.
Ịmụta ụdị bụ ihe niile banyere eme emehie ihe, n'ihi ya, anaghị inwe nkụda mmụọ ma ọ bụrụ na ị kụrụ na-ezighị ezi isi.
Gbalịa pịnye na a mgbe nile ọsọ.
Eweli gị wrists ga-enyere hụ mkpịsị aka gị nwere ike n'Izrel ala na see igodo ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi.
Ka ịgbanwee n'etiti mkpụrụedemede / obere eji mgbe niile abụghị aka. Cheta na: akwụkwọ ozi ndị na ụfọdụ laptọọpụ keyboards nwere ike ịbụ nso ọnụ.
Lelee gị anya si keyboard. Gbanwee otú gị na oche zere a na-enwekarị nsogbu - ọdụ kwa nso ka keyboard. Gbanwee n'akuku nke gị ileba anya iwelata ntigbaa.
Ka ị na-eme, na-mma ị ga-pịnye ma na-amụba ọsọ gị.
Ọ bụrụ na ị maara kpọmkwem ebe a akwụkwọ ozi ma ọ bụ nọmba isi bụ, ị ga-enwe ike idepụta ya na-enweghị na-achọ ala na keyboard.
Ọ bụrụ na o kwere omume, na-agbalị na-eme na mgbe keyboard na ọ bụghị a laptọọpụ keyboard.
Inwe ntụsara gị na keyboard na-eme ka n'aka na ọ bụ nri elu mkpịsị aka gị.
Tupu ị na-amalite dee ọsọ ule jide n'aka na ị na-ọdụ eguzozi, ụkwụ gị ewepụghị n'ala. Nọgidenụ na-elbows gị nso ahu, gị wrists ogologo na gị forearms larịị ma-echeta na-mgbe oge izu.
Atụrụ ndụ omume: Gbasara mkpịsị aka nke ma aka dị iche iche. Jide ise sekọnd, mgbe ahụ zuru ike. Tinyegharịa maka a ngụkọta nke ugboro atọ.
Jide n'aka na tụọ gị dee ọsọ oge - na anyị ngwá ọrụ ị nwere ike ịlele ọganihu gị ma na-agba na izi ezi dị ka ị na-amụta. Ọnụ ọgụgụ nke okwu kwa nkeji na-egosi gị dee larịị.
Dee ule tụọ ihe abụọ, ọsọ na-emehie, ya mere mgbe ị na-anyị dee ọsọ ule, adịghị anya nanị gị na-agba.
Ọ bụrụ na ndị keyboard dị elu (oche oke ala) njehie agbasaghị-erukwa na n'elu keyboard ahịrị. Ọ bụrụ na ndị keyboard dị oke obere (oche kwa elu) njehie agbasaghị-erukwa na ala keyboard ahịrị.
Atụrụ ndụ omume: Nwere aka gị enịm ke a n'ọnọdụ yiri na nkwojiaka ndọtị, jiri nwayọọ tinye mgbali iji ndị ọzọ aka agbatiri isi mkpịsị aka na a na azụ na ala direction. Jide ise sekọnd na zuru ike. Tinyegharịa a ugboro atọ kwa n'aka.
Ọ nwere ike na-achọ ka a izu ma ọ bụ abụọ ga-esi na-agba nke ~ 50 okwu kwa nkeji ma ọ bụrụ na ị na-eme 30-60 nkeji kwa ụbọchị. Nwee ndidi.
Setịa gị wrists na mkpịsị aka tupu ịmalite a dee ule.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka dee mfe, ị kwesịrị ị na mma gị na dexterity. Ọ na-enyere ma ọ bụrụ na ị na-egwu guitar ma ọ bụ ọzọ ngwá na-achọ gị aka.
Atụrụ ndụ omume: Setịa ma ogwe aka outwards na mkpịsị aka ọnụ ma na-abịaru a gburugburu na aka gị, n'usoro ha na nkwojiaka. Ise okirikiri ke kiet ke otu direction, mgbe ahụ ise na-abụghị direction.
Nkata na ndị enyi na ezinụlọ.
Rụchaanụ ọ bụla ihe, ahụ na-agbalị a ọsọ ule.
Mgbe-amụta ụdị, ọ dị ezigbo mkpa na ị arapara a otu ebe oge nke omume ma ọ bụ mkpịsị aka gị ga-amalite ida ha muscle ebe nchekwa.
Atụrụ ndụ omume: Jide gị na ogwe aka eyi na ọbụ chere ihu ala. Ịkpọlite ​​ndị aka dị ka ị na-agwa onye na-akwụsị. Iji abụghị aka, tinye na nrụgide n'ọbụ aka-akpọlite ​​n'aka. Jide mgbali ise sekọnd, mgbe ahụ zuru ike. Tinyegharịa maka a ngụkọta nke ugboro atọ kwa n'aka.
Ọ bụrụ na ị na-amụta pịnye ngwa ngwa mgbe na-achọ na keyboard, ị ga-anọgide na-enwe oge siri ike na mkpoputa mejọrọ na okpukpo mgbe ị ga-apụ gaa ata ụwa dee ọnọdụ n'ihi na ị ga-enwe ike ịhụ emehie na ihuenyo.
Drape a aka towel karịrị gị aka mgbe ị pịnyere.
Malite ngwa ngwa ma na-amụta dum keyboard tupu ị na-amụta pịnye ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na dee na-akpata ị mgbu, ịkwụsị ozugbo ma na-a ezumike.
Ọ bụrụ na ị na-amụta na a na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, na-agbalị kpakorita na were gị n'ọrụ maka a oge dị jụụ nke ụbọchị ịrara gị ọmụmụ - were gị n'ọrụ ga na-erite uru site gị nkà ndị ọhụrụ.
Ọ bụ na-achọsi ike iji zere anọ na otu ọnọdụ ruo ogologo oge. Ịhapụ gị ụbọchị site nwetụ aga-eme mgbe o kwere omume.
Ọ pụrụ inyere gị aka iji na oti mkpu ichetara onwe na-a okpukpu si gị keyboard.
Atụrụ ndụ omume: Jide ogwe aka gị n'elu, na nkwụ chere ihu ala. Idebe n'aka ala na nkwojiaka. Iji n'ọbụ aka abụghị aka, tinye na nrụgide azụ nke ama esịn ubọk. Jide mgbali ise sekọnd, mgbe ahụ zuru ike. Tinyegharịa ugboro atọ kwa n'aka.
Dị ka kọmputa amụbawo ma na-arụ ọrụ na ụlọ na-adịbeghị anya ugboro ugboro nje Mmerụ aghọwo metụtara keyboard were.
Iji belata gị n'ihe ize ndụ nke na-emepe emepe ihe n'ụzọ gabigara ókè unan ị kwesịrị ị na-eso mma omume na postcho, Usoro, workstation setịpụrụ-elu ma na-mgbe oge izu.
Gị nkwojiaka, elbows na keyboard kwesịrị na otu kehoraizin ụgbọelu na a 90 ogo n'akuku gị elu na ogwe aka. The n'elu gị na ihuenyo kwesịrị nso anya ozo.
Unu anya na keyboard mgbe ị pịnyere. Dị nnọọ slide mkpịsị aka gị gburugburu ruo mgbe ha na-ahụ n'ụlọ n'usoro markings. Unu hama na igodo. Gbalịa iji dị ka obere ike dị ka o kwere mee.
Ịga nke Ọma na mma-adabere na gị mkpebi siri ike-arapara n'ahụ aka dee mgbe ị okokụre na-amụta. N'ihi na ndị na-ala azụ nwere ike, tụlee na ị ga-ihe karịrị naghachi amụta oge a izu ole na ole si na ụba na arụpụtaghị ihe.
I kwesịkwara ịmụta iji isi igodo ọnụ na Ctrl na Alt igodo - nke a bụ nnọọ uru n'ihi na keyboard mkpirisi ụzọ.
Ife na ndụ n'ezie ọnọdụ bụ oké ụzọ n'ihu welie nkà gị na obi sie gị ike.
Ịtọ oge mgbe omume na 'Speed ​​ule' mma gị na dee ọsọ.